Oluludaka Pump, oluludaka Pump Impeller, Shaft sleeve - Winclan
Shijiazhuang Winclan Machinery Equipment Co., Ltd. imveliso yethu engundoqo ziquka impompo ezahlukeneyo. Iimpompo zethu zisetyenziswa kakhulu kukhuselo lokusingqongileyo, imigodi, amalahle, izityalo zamandla obushushu, ipetroleum, imichiza, unyango lwamanzi amdaka, iintlobo zeeprojekthi zokugcina amanzi, unkcenkceshelo lwefama, ulwakhiwo, njl. Ukuqala kunye neepompo. Ngoluhlu olubanzi, umgangatho olungileyo, amaxabiso afanelekileyo kunye noyilo lwesitayile, iimveliso zethu zisetyenziswa kakhulu kwipetroleum, imichiza, amayeza kunye namanye amashishini.
Oku kuxhaswe liqela elinamandla lobuchwephesha kunye nesicelo esibanzi sobunjineli kunye noyilo loyilo.
Siyazingca ngokubonelela ngamava okufumana okungagungqi kunye neqela elizinikeleyo lokuthengisa ngokuma ukuze kuqinisekiswe ukuba wonke umthengi ufumana eyona nkonzo ifanelekileyo.
Isiqinisekiso sethu se-ISO 9001: 2008 siqinisekisa ukuhanjiswa kwiimfuno zabathengi ngaphandle kokukhetha.
Oluludaka Pump Isakhelo Plate-032
Impompo yokuhambisa amanzi amdaka eYW Submersibel
Impompo yZ submersible
Impompo CENTRIFUGAL AKANAKUKHUMBULA UNOBANGELA WAMANZI
Kukho umoya kwigwebu nempompo (1) abanye abasebenzisi abagcwali manzi ngokwaneleyo phambi kokuba impompo iqale; ngamanye amaxesha amanzi abonakala ngathi aphuphuma kumngxunya wokungena, kodwa angajiki isampu yempompo emoyeni idiniwe ngokupheleleyo, eshiya umoya omncinci kumbhobho wokungena okanye kwimpompo (2) wi ...
ISICWANGCISO SONYANGO SOKUGQIBELA ISIDIMA
Luphuma njani udaka kule mfumba idikiweyo? Le yingxaki enzima yokomba imfumba. Inkqubo yokomba kunye nokugungqa imfumba yesiko yile: kwinkqubo yokomba ukusetyenziswa kwesisefo, udaka kwitrafikhi encinci, isanti kunye namanye amasuntswana aqinileyo okwahlulahlulahlula ...
UKUHLAWULWA KWEZIBONELELO ZOKUGQIBELA KWAMANZI
Ukucima impompo ye-Centrifugal ikakhulu kubangelwa kukusilela kwetywina loomatshini. Ukusilela kwintsebenzo kuninzi lokuvuza, izizathu zokuvuza okulandelayo: ① static and dynamic ring seal surface ukuvuza, izizathu eziphambili zezi: ukuphela kwendiza yokubhabha, uburhabaxa abuhlangabezananga ne-req ...
Shijiazhuang Winclan oomatshini Equipment Co., Ltd.